Fetiben'ny literatiora Cheltenham Powered by Blackmagic Design | NAB Show News | 2020 NAB Asehoy ny mpiara-miasa amin'ny Media sy ny mpamokatra ny Kat Show LIVE. Vaovao momba ny haino aman-jery
Home » Vaovao » Fetiben'ny literatiora Cheltenham Powered by Blackmagic Design
Fremont, CA - Novambra 20, 2020 - Blackmagic Design androany dia nanambara fa ny onjam-pamokarana mivantana multicam, naorina manodidina ny Blackmagic URSA Broadcast, dia nampiasaina hanaterana hetsika miaraka mandritra ny folo andro amin'ny Fetiben'ny literatiora Cheltenham fanao isan-taona.
Ny Bubble Production dia nahafahan'ny festival malaza eran-tany nandeha tamin'ny endrika nomerika voalohany tamin'ny tantarany 71 taona. Nanomboka i Graham Essenhigh, talen'ny fitantanana ao amin'ny Bubble, “Rehefa nahavita nanatontosa hetsika 300 mahery tamina Internet ho an'ny Fetiben'ny Hay tamin'ny fiandohan'ny taona, dia nentina taminay ny fanamby nataon'i Cheltenham. Ny fahasamihafana lehibe indrindra tamin'iny fotoana iny dia ny fiverenantsika teny an-toerana, nanaterana ny efijery teny an-toerana sy ho an'ny mpijery nomerika. ”
Ny tsirairay amin'ireo toerana telo dia nisy fakantsary Blackmagic URSA Broadcast telo ary Micro Studio Camera 4K iray, izay natambatra tamin'ny B4 Fujinon HD Mitovy amin'ilay family mbola. "Zava-dehibe taminay ny fanamafisana ny fihodinan'ny tariby noho ny halavirana, ary nampiasainay Teranex Mini Quad SDI ka hatramin'ny 12G-SDI ary Teranex Mini 12G-SDI ho an'ny mpanova Quad SDI ho rafitra multiplex," hoy i Graham.
Ny fakantsary dia niverina tamin'ireto singa ireto tamin'ny 1080p50. Ny roa amin'ireo toerana dia nampifandraisin'ny fibre taktika avy amin'ny quad nisaraka niverina tany amin'ny faritra fanaraha-maso afovoany, izay nisy ATEM 1 M / E Production Studio 4K miaraka amin'ny ATEM 1 M / E Advanced Panel. Naverina naverina ny komana miverimberina ho an'ny comms, tally ary fampifanarahana. Ny toerana fahatelo dia iray kilometatra miala ny MCR afovoany, ka noho izany dia mifangaro eo an-toerana sy voarakitra eo an-toerana ny fahitan'ny ekipa. Ny fampifangaroana nafangaro dia nakarina tamin'ny alàlan'ny fivezivezena fitaterana niverina tany amin'ny MCR ho an'ny vokatra atiny.
Ny fakan-tsary rehetra dia nalaina an-tsoratra tamin'ny alàlan'ny fandraisam-peo lozisialy ary notohana tao amin'ny HyperDeck Studio Minis. Ny master mix dia samy manana ny kinova ProRes 422 sy ny tranokala vonona H.264 voarakitra.
Hoy koa i Graham: Ary farany zaraina rakitra zarazaraina amin'ny mpiara-miasa amintsika, Dreamteam TV. Navoaka ho sarimihetsika manasongadina ny Sky Arts sy ny Marquee TV. ”
Hoy izy nanohy: "Efa mpankafy an'i Blackmagic Design tato anatin'ny folo taona lasa izay, nanolo miadana ny saika ny fitaovana famokarana rehetra. Niahiahy izahay sao misy tabataba amin'ny fampielezam-peo URSA ao amin'ny efitrano malalaky ny maizina, na izany aza dia nahagaga ny sary. Tsy misy teny hafa milaza an'io. Manana folo amin'izy ireo ao amin'ny lisitry ny kitinay izahay ary tsy afaka manome tsiny azy ireo. ”
Hoy i Graham namarana: “Ny fanamby lehibe natrehiko hatrizay dia ny tsy fiheveran'ny olona ivelan'ny boaty. Ny fiaviako amin'ny vaovao sy ny raharaha ankehitriny dia nampianatra ahy hahay hanan-karena. Ohatra iray voalohany ny fampiasana ny Teranex Quad ka hatramin'ny 12G unit ho rafitra multiplex. Mety ho fampiharana tsy mahazatra io, nefa manome vahaolana amin'izay ilaintsika, ary tsy izany ve no tanjona farany?
“Eto no ahazoana tombony ary mandresy fifanarahana izahay noho ny fahafahanay mampifanaraka sy mandroso ny zavatra ho an'ny mpanjifa. Na izany aza tsy vita izany raha tsy misy kit tsara, ary mino izahay fa hitanay fa teo amin'ny rojo Blackmagic izay napetrakay. ”
Sarin'ny vokatra Blackmagic URSA Broadcast, Blackmagic Studio Viewfinder, Blackmagic Micro Studio Camera 4K, ATEM Camera Control Panel, ATEM 1 M / E Production Studio 4K, ATEM 1 M / E Advanced Panel, ATEM Talkback Converter 4K, Blackmagic Audio Monitor 12G, HyperDeck Studio Mini, Smart Videohub 12G 40 × 40, Teranex Mini 12G-SDI mankany Quad SDI, Teranex Mini Quad SDI ka 12G-SDI, ary ny hafa rehetra Blackmagic Design entana dia hita ao amin'ny www.blackmagicdesign.com/media/images.
ATEM 1 M / E Advanced Panel ATEM 1 M / E Production Studio 4K Blackmagic Design HyperDeck Studio Minis micro studio studio 4k URSA Broadcast cameras 2020-11-20
Previous: Matrox Extio 3: IP KVM voalohany manerantany hanitatra ireo rafitra valo miampita ny sehatr'asa Dual-4K lavitra
Next: Dorna dia nampientanentana ny mpijery MotoGP nijery ny sary Viz Arena virtoaly sy nampitombo ny zava-misy